Novely zelandy " Journey-Assist - Fampahalalana, toetr'andro, vanim-potoana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Oseania sy Australia » New Zealand
Hihaona any Nouvelle-Zélande
Manintona ny mpandehandeha i Nouvelle-Zélande amin'ny hakanton'ny natiora niainany. Misy geyser tsara tarehy, tendrombohitra, farihy, ala, grottoes, glacier, morontsiraka. Noho ny hetsiky ny tontolo iainana mavitrika ao amin'ny firenena, ireo voalaza etsy ambony ireo dia mijanona ho simba avokoa - eny fa na dia akaikin'ny tanàna lehibe indrindra aza.
Ho fanampin'ny zava-boary mahafinaritra sy ny programa fitsangatsanganana mahafinaritra, i New Zealand dia heverina ho toerana nahaterahan'ireo karazana fizahan-tany tafahoatra. Misy hetsika isan-karazany azo alaina eto: bungee jump, gliding, skydiving, air surfing, rap jump, zorbing. Eo koa ny fahafahana mahita trozona amin'ny tontolo voajanahary iajerena, mijery ireo fjord sy glacer be voninahitra, mandehandeha eny amin'ny arabe any Auckland sy be Wellington kokoa milamina kokoa, na mianatra mianatra amin'ny teny anglisy aza.
Zorbing any New Zealand
Ireo mpankafy nofinofy dia mahafantatra tsara fa i Nouvelle Zélande no niasa ho toerana fanaovana horonantsary an'ilay trilogy sarimihetsika malaza "The Lord of the Rings". Ny volkano Ruapehu sy Tongariro, tanànan'ny Queenstown ary ny ony Wikato dia mbola tsidihin'ny mpankafy maro an'ity sarimihetsika ity.
Ny Lord of the Rings dia nalaina tany New Zealand
Nandritra ny 10 taona lasa, nahasarika mpizahatany mpizahatany i New Zealand, tsy noho ny tantara mahatsikaiky ihany, fa koa noho ny fahafaha-mihetsika tsy manam-petra amin'ny fitsangatsanganana, ny fanentanana ary ny fisakafoanana. Marina fa ho an'ny vahiny maro, ny sidina iray lafo be no mahatonga ny fandehanana mankany amin'ity firenena ity. Na izany aza, ny mpandeha an-tapitrisany manodidina ny 5 tapitrisa isan-taona no mameno ny tetibola any New Zealand, mankafy ny toetra sy ny kolontsain'izy ireo.
Mendrika hijerena manokana ny biby any Nouvelle-Zélande. Vorona kiwi mahatsikaiky ity izay nanjary tandindon'ny firenena iray manontolo; boloky kakapo tsy afaka manidina; penguin be vola; biby sy vorona am-polony hafa izay tsy hita na aiza na aiza eto ambonin'ny planeta, monina any New Zealand irery. Ireo izay te-hidera ny manga, trozona sperm ary trozona mpamono olona eto amin'ity firenena ity koa dia manana vintana betsaka kokoa noho ny any amin'ny faritra hafa eto an-tany - ireo biby mampinono anaty rano be matetika dia milomano mankeny amoron'i Nouvelle Zélande.
Toetany ao Nouvelle-Zélande
Ireo nosy lehibe any Nouvelle Zélande dia somary miovaova amin'ny toetrandro. Ny nosy avaratra dia miavaka amin'ny fanjakan'ny toetrandro malefaka subtropika. Ny atsimo kosa mandry amin'ny latitude sométhat, ka afaka milay izy. Antony iray lehibe amin'ny famoronana ny toetrandro eto amin'ity nosy ity ny Alpes atsimo, izay tsy mamela ny rivotra avy any andrefana hahatratra ny lemaka atsimo. Vokatr'izany, ny faritra atsinanan'ny Nosy atsimo no faritra maina indrindra amin'ny firenena iray manontolo. Ny ankamaroan'ny nosy kely ao amin'ny ranomasina Tasman dia miavaka amin'ny karazan-toetr'andro tropikaly izay mamorona ny ankehitriny Andrefana Atsinanana mafana.
Any Nouvelle-Zélande, ny orana dia mirotsaka tsara mandritra ny taona. Fa amin'ny fahavaratra dia mihena kely ny haavony. Mandritra ny taona, ny habetsaky ny rotsak'orana dia mety hatramin'ny 600 ka hatramin'ny 1 mm. Ny isotherm isan-taona ao amin'ny Nosy South dia +600, ary amin'ny North Island +10. Ireo volana izay dia fahavaratra any amin'ny hemisphere avaratra, atsimo - ririnina fotsiny. Ka ny volana mangatsiaka indrindra eto amin'ity firenena ity dia ny Jolay. Ny faritra mangatsiaka indrindra amin'ny firenena dia ny tendrombohitra any amin'ny Nosy atsimo. Ny volana mafana indrindra any Nouvelle Zélande dia ny volana Janoary sy Febroary. Ny mari-pana isan-taona any Auckland sy Wellington dia mahatratra 16 degre. Ny mari-pana mangatsiaka indrindra amin'ireo tanàna ireo dia 30, ny avo indrindra dia mahatratra +0.
Weather in New Zealand ankehitriny + vinavina
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Fanetrentena, hafainganam-pandeha, onja, orana, rahona any Nouvelle-Zélande. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.
Fiantsenana any Nouvelle-Zélande
New Zealand dia azo antoka fa tsy mety amin'ny fitsangatsanganana feno feno. Na izany aza, eto, mazava ho azy, afaka mividy souvenir na trifles ilaina, ohatra, mandritra ny fialantsasatra amoron-dranomasina.
Sarotra ny tsy hifanena amin'ny makiazy sandoka ary amin'ny ankapobeny tsy dia lafo, na izany aza, misy zavatra manokana tsy ho hita amin'ny akanjo. Ny vokatra amin'ny marika manerantany dia atolotra any amin'ny fivarotana marobe amin'ny tanàn-dehibe lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Misy ny entana vita amin'ny mpanjifa sinoa koa ary amidy na aiza na aiza.
Any Nouvelle-Zélande ianao dia afaka mividy akanjo faran'izay tsara, entana ho an'ny ankizy, zavatra avy amin'ny hodian'ny ondry. Eto ianao dia afaka mahita ny asa tanana malagasy, ny firavaka perla ary vokatra vita amin'ny kosmetika avy amin'ny zava-maniry maniry ao an-tanindrazana toy ny fanomezana.
Any Auckland, ny akanjo manamboatra kalitao ambony dia mendrika ny hojerena aloha. Wellington dia mety amin'ny fivarotana tanàna. Any amin'ny tanàna hafa, mahita mahita asa tanana sy vokatra vita amin'ny famokarana any New Zealand ianao. Na amina tanàna kely, souvenir, tandindona nasionaly ary zavatra mahaliana izay azo jerena manokana any Nouvelle-Zélande dia amidy.
Tsy azo atao izao ny manandrana ny tena sakafo Maori - ny New Zealanders maoderina dia mihinana lovia "entin'ny" mpanjanatany avy any Great Britain. Fa raha misy amin'ireo mponina eo an-toerana manolotra fizahan-tany ho an'ny mpizahatany amin'ny endrika sakafo matsiro nandrahoina tao anaty lafaoro nentim-paharazana "hangi", azontsika atao ny mieritreritra fa sambatra ilay mpitsangatsangana hahafantatra ny nahandro Maori. Eny tokoa, talohan'ny nanafihan'ny Anglisy dia nampiasa lafaoro toy izany ireo aborigines.
Ny sakafo sy sakafo mahazatra indrindra any New Zealand dia ny zanak'ondry, barbecue, trondro, ovy. Karazan-ovy manokana "Kumara" misy tsiro mamy novolena eto amin'ity firenena ity. Izy io dia atolotra any amin'ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana sakafo. Ny tsindrin-tsakafo any Nouvelle-Zélande malaza indrindra dia ny mofomamy Pavlova, nantsoina taorian'ny balerina Rosiana malaza. Ny zava-pisotro malaza indrindra eto amin'ny firenena dia ny kafe. Ny karazany mahazatra indrindra dia azo antsoina hoe "fisaka fotsy" (kinova latte misy eo an-toerana). Saingy tsy ny trano fisakafoanana rehetra any Nouvelle Zélande no manana hazan-dranomasina. Na izany aza, azonao atao ny mitsidika toeram-pambolena makamba na akorandriaka ary manandrana sakafo matsiro sasany ho anao handrahoana sakafo any aoriana any.
Ary mbola vao tsy ela akory izay dia nanomboka nivoatra ny famokarana divay tany New Zealand. Misaotra an'izany ny enotours ho an'ny mpizahatany mankany amin'ny tanimboaloboky ny nosy lehibe roa. Ary ho an'ny fanandramana mahazatra, azonao atao ny mividy divay eo an-toerana isaky ny fivarotana lehibe. Ny ankamaroan'ny voaloboka fotsy dia ambolena any New Zealand. Na izany aza, raha ilaina dia mora ny mahita pinot noir. Tsara homarihina ny zava-pisotro tsy misy alikaola Lemon & Paeroa, vita tamin'ny rano mineraly sy ranom-boasarimakirana.
Lafin'i New Zealand
Language: Anglisy, Maori, tenin'ny tanana any Nouvelle Zélande
Kaody finday: 64 +
Sandam-bola: New Zealand dolara (NZ $ - NZD)
Sehatra Internet: .nz
Safidy lahatsoratra mahasoa vakiana alohan'ny handehanana any New Zealand.